IiNkqubo zeKholeji ze-20 zexesha eligcweleyo ezineeNxulumano zabo zeSicelo
Apha ngezantsi, senze uluhlu lweenkqubo ezimalunga ne-20 zeekholeji ezi-intanethi ezijolise kwabo base-Ontario ngeenkcukacha zabo ezisisiseko kunye neekhonkco zesicelo sabo bonke abafundi bethu.
Ukufumana izakhono kunye nolwazi kuyanceda kuba akukho lwazi luyinkcitho njengoko lunokuvela ukukunceda ngandlela thile. Ukufumana ezi zakhono kunye nolwazi oludingayo lokufunda, eli nqaku lizisa kuwe ulwazi oluneenkcukacha kwiinkqubo zeekholeji ezikwi-Intanethi ezise-Ontario eziza kukunceda ukuba uziphucule kwaye ubenazo ezi zakhono.
Usenokuba ufumene enye okanye ngaphezulu eyunivesithi okanye izidanga zekholeji kwezinye iinkalo zokufunda zilungile kodwa akuyi kuba buhlungu ukongeza ngakumbi kuluhlu kwaye ngaphandle kwezakhono ngakumbi kunye neendawo zokufunda, ufumana kwaye ugubungele, kokukhona amathuba akho ukufumana umsebenzi olungileyo okanye ukwanda ngempumelelo.
Kwimeko yokufumana ingqesho elungileyo, i-CV yakho iya kuba nayo yonke imimandla yakho yokufunda ikwenze ubonakale ngathi ungobungcali kwaye ubetha ukhuphiswano lwengqesho. Kwaye kwinqanaba lokuphumelela, ngolwazi lwakho oluninzi kunye nezakhono, ungaya kwezorhwebo, uqalise ikhondo elitsha lomsebenzi elinamathuba aphezulu okuphumelela.
Ngokumangalisayo, uya kufumana ezi zakhono kunye nolwazi ngokufunda kwi-Intanethi awuzukufuna ukuya kuxinzelelo lokuya kwisikolo esiqhelekileyo njengoko ubenzile ukufumana ezinye izatifikethi, kule meko, into oyifunayo yikhompyuter / ilaptop, uqhagamshelo lwe-intanethi, kunye nokusebenza nzima kwakho.
Nangona kunjalo, awunyanzelekanga ukuba ubenazo ezinye izidanga ukuze ulungele inkqubo ye-intanethi evela kwiikholeji ezikwi-Intanethi okanye kwiiyunivesithi ezibonelela ngenkqubo yesidanga kwi-intanethi. Yenzelwe wonke umntu, isidanga okanye isidanga. Sele ndidwelisile konke oku kuyakufuneka ukuba ubalasele kwinkqubo yokufunda ekwi-Intanethi.
Iinkqubo zekholeji ezikwi-Intanethi endizibonisa zona zizifundo ezisisigxina eziza kukuxhobisa ngezakhono nolwazi olufunekayo kwimibutho yanamhlanje, ndithembe ukuba uza nesi satifikethi kwi-CV yakho yengqesho oya kukhethwa kwangoko.
Njengenkqubo yexesha elizeleyo kuya kuthatha iminyaka eyi-1-2 ukuyigqiba, ewe ewe, bakhawuleza izidanga kwi-Intanethi. Bathatha ixesha elincinci ukugqiba kunenkqubo yexesha elizeleyo ebonelelwa kwizikolo eziqhelekileyo ngaphandle kweintanethi. Ewe, sesinye sezibonelelo eziphambili zokufunda kwi-Intanethi. Uya kuba nenkululeko yokufunda ngokulula kwaye ayithinteli imisebenzi yakho yesiqhelo.
Kuthetha ukuba unokuba usebenza kwintlangano kwaye uthathe isigqibo sokuthatha naziphi na izidanga ezikhawulezayo kwi-Intanethi ukwandisa indawo yakho yobungcali ukukuzisela indawo entsha nencono yokunyusa. Emva kokugqiba nayiphi na kwezi nkqubo ze-intanethi, uya kufumana iSatifikethi se-Ontario College.
Isilumko kwezemfundo, iCanada yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokufunda emhlabeni ezibonelela ngemfundo esemgangathweni kwaye isatifikethi esinikwe abafundi abaphumeleleyo bayaziwa kwihlabathi liphela kwaye iyafana neenkqubo zexesha elizeleyo ezikwi-Intanethi e-Ontario eyindawo eCanada ezinye ze ezona zikolo zibalaseleyo emhlabeni kwaye enye yazo yiKholeji yaseOntario.
Iinkqubo ezisisigxina ze-intanethi endizibonisa kuwe zisuka ngqo kwiKholeji yase-Ontario kwaye ungaqali ukucinga ukuba isatifikethi esifunyenwe ngohlobo lokufunda luphezulu kunalolo lufunyenwe kwi-Intanethi, ziyafana kwaye ziyaziwa ngaloo ndlela yimibutho emhlabeni jikelele.
1 IiNkqubo zeKholeji eziPhezulu ze-Intanethi
1.1 # 1 iAutism kunye neNkqubo yokuSebenza yezeNzululwazi kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.2 # 2 Inkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi
1.3 # 3 Inkqubo yeAkhawunti yeShishini kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.4 # 4 Inkqubo yokuThengisa kwiShishini kwiKholeji
1.5 # 5 Inkqubo yoLawulo lwezoShishino kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.6 # 6 Inkqubo yeShishini esisiseko kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.7 # 7 Inkqubo yoKhathalelo lwaBantwana noLutsha kwi-Intanethi
1.8 # 8 IiNkonzo zoLuntu kunye nezoBulungisa kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.9 # 9 Inkqubo yeKhompyuter yeNkqubo yeKhompyuter
1.10 # 10 yoLawulo lweProjekthi yeNkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi
1.11 # 11 Inkqubo yeMfundo yaBantwana aBasaqalayo kwiKholeji
1.12 Inkqubo ye-12 yeKholeji yoLawulo oluNgxamisekileyo kwi-Intanethi
1.13 # 13 Inkqubo yokuXhobisa impilo kunye neMpilo kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.14 # 14 Uphicotho-zincwadi zeNkundla kunye noPhando loRhwaphilizo kwiKholeji yeKhompyutha
1.15 # 15 Inkqubo yoLawulo lwaBasebenzi kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.16 # 16 Ulawulo lweOfisi- Inkqubo yeKholeji ePhakamileyo ye-Intanethi
1.17 # 17 Ulawulo lweOfisi-Inkqubo eKholeji ekwi-Intanethi
1.18 Inkqubo ye- # 18 yamaPolisa eSiseko seKholeji
1.19 # 19 Inkqubo yeMicimbi yoLawulo kwiKholeji ekwi-Intanethi
1.20 # 20 Inkqubo yaBabhali abaDala yeKhompyutha
1.21 I ngcebiso
IiNkqubo zeKholeji eziPhezulu ze-Intanethi
Emva kophando olunzulu, ndakwazi ukuqokelela uluhlu lweenkqubo ezingama-20 ezahlukeneyo zekholeji onokuthi ukhethe kuzo kwaye unokufumana ingqesho ngokukhawuleza okanye uqale ikhondo lomsebenzi ophumeleleyo.
I-Autism kunye neNkqubo yezeNzululwazi kwiKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yeShishini kwiKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yeAccounting yeShishini kwiKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yeNtengiso yeShishini kwiKholeji
Inkqubo yoLawulo lwezoShishino kwiKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yeShishini esisiseko kwiKholeji
Inkqubo yoKhathalelo lwaBantwana noLutsha kwi-Intanethi
IiNkqubo zoLuntu kunye nezoBulungisa kwiKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yeKhompyuter yeeNkqubo zeKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yoLawulo lweProjekthi yeKholeji ekwi-Intanethi
INkqubo yeKholeji yaBantwana aBasaqalayo kwi-Intanethi
Inkqubo engxamisekileyo yoLawulo lweKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yokuXhobisa impilo kunye neMpilo kwiKholeji ekwi-Intanethi
I-Forensic Accounting kunye noPhando loRhwaphilizo kwiNkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yoLawulo lwaBasebenzi kwiKholeji ekwi-Intanethi
Ulawulo lweOfisi-Inkqubo yoLawulo lweKholeji ekwi-Intanethi
Ulawulo lweOfisi-Inkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi ngokubanzi
Inkqubo yamapolisa eSiseko seKholeji
Imicimbi yoLawulo kwiNkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi
Inkqubo yaBabhali abaChwephela kwiKholeji
# 1 iAutism kunye neNkqubo yokuSebenza yezeNzululwazi kwiKholeji ekwi-Intanethi
Le yinkqubo yekholeji yonyaka omnye ekwi-intanethi efanelekileyo ngokufanelekileyo kubantu abathanda ukusebenza nabantwana kunye neentsapho kwaye banezakhono zokujonga kunye nokuhlalutya. Uya kuxhotyiswa ngesiseko esiqinileyo kwimigaqo yoHlolo oluSebenzayo lokuSebenza olunokusetyenziselwa ukunyanga abantwana abanengxaki yengqondo.
Emva kokuthweswa isidanga kule nkqubo ye-intanethi yexesha elizeleyo uya kuvuleleka kumathuba amakhondo njengokusebenza namaqela onyango lwe-ASD, iiarhente zoluntu, iibhodi zesikolo, kunye noseto losapho.
# 2 Inkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi
Le yinkqubo yekholeji ekwi-intanethi yexesha elizeleyo emibini apho kuzo zombini izifundo zethiyori kunye nezisebenzayo uya kuphuhlisa izakhono ezibalulekileyo kwiindawo ezininzi zeshishini ukusuka kwezemali kunye nentengiso ukuya kwimisebenzi nakwizibonelelo zabasebenzi. Inkqubo yeshishini iya kukuxhobisa ngezi zakhono zilandelayo;
Inkcazo enomdla kunye nezakhono zonxibelelwano
Izicelo zekhompyuter zeshishini eziphambili
Imigangatho yenkonzo ebalaseleyo yabathengi
Ngexesha lokufunda kwakho, uya kuba nenxaxheba kulwazi oluninzi olusebenzayo kubandakanya ukuthatha inxaxheba kumdlalo wokurhweba wokuhlekisa kwaye emva kokuba uthweswe isidanga ungasebenza kuluhlu olubanzi lwamacandelo asekhaya nakwamanye amazwe anje ngeeofisi zikarhulumente, abathengisi, abavelisi kunye engenzi nzuzo, amaziko emali kunye ne-inshurensi kwaye nakwicandelo lezonyango apho unokuba kwizikhundla ezinje ngomphathi wentengiso, abasebenzi abaxhasa ugcino mali, abancedisi bezentengiso, abaqeqeshwayo kulawulo okanye ukulandela nje ithuba loshishino.
# 3 Inkqubo yeAkhawunti yeShishini kwiKholeji ekwi-Intanethi
Oku kwahlukile kule nkqubo ingentla, kwiShishini-kwiAccounting yinkqubo yekholeji ekwi-Intanethi yeminyaka emibini ejongene nokulinganisa ithiyori yobalo ngamava ezandla.
Uya kufunda izakhono ezinkulu ukuphumelela kwiindawo ezahlukeneyo zokungena kwinqanaba lokunikwa kwengxelo, uya kufunda nokuba ungayenza njani imisebenzi eyahlukeneyo yokuphendula, unxibelelwano lwakho, izibalo kunye nezakhono zetekhnoloji zomelezeka ngokulinganayo.
Abantu abanobu buchule bokunika ingxelo yeshishini kunye nolwazi bafunwa phantse ngumbutho wonke apho banokuthi basebenze njengeakhawunti ehlawulwayo / efumanekayo unobhala, umncedisi wemivuzo, umgcini-ncwadi, njl.ukusebenza kwiindawo ezahlukeneyo zobalo.
# 4 Inkqubo yokuThengisa kwiShishini kwiKholeji
Le yinkqubo yekholeji ekwi-intanethi yeminyaka emibini ebonelela abafundi ngesiseko sokuthengisa esomeleleyo nesisebenzayo sokukhulisa ulwazi lwabo kunye nezakhono zokusebenzisa ukuze baphumelele kuluhlu olubanzi lwezentengiso kunye neendima zeshishini.
Ukuthengisa ngeshishini kukufundisa ukuba ukuthengisa kuyichaphazela njani na ishishini ekusebenzeni ukuvelisa kunye nokuhambisa ezinye iikhonsepthi ezibalulekileyo ezinje ngentengiso yedijithali kunye nokusasazwa, imveliso kunye nesicwangciso samaxabiso, ulawulo lokuthengisa, uphando lwezentengiso, njl.njl.
Intsimi enkulu yamathuba okuthengisa avulelekile ukuba ufumane umsebenzi ezinye zezi nkalo zezi;
Ukuthengisa kwiWebhu nakwiDijithali
Uphando loPapasho noCwangciso
#5 Inkqubo yoLawulo lwezoShishino kwiKholeji ekwi-Intanethi
Le yinkqubo yekholeji ekwi-intanethi yeminyaka emithathu eya kuthi ibonelele ngezakhono ezibalulekileyo kunye nolwazi lomsebenzi weshishini. Ulawulo lweShishini luyakwenza ukuba ube yingcali kuyo yonke imijelo yeshishini, uya kuba nolwazi olubanzi kuluhlu olubanzi lwezikhundla zeshishini.
Emva kokugqiba le nkqubo uvulelekile kumjelo omkhulu wamashishini okanye uthathe isigqibo sokulandela ikhondo lomsebenzi wokurhweba onokuthi ubenakho ngempumelelo
#6 Inkqubo yeShishini esisiseko kwiKholeji
Le yinkqubo yekholeji yonyaka omnye apho uya kufunda izakhono zethiyori kunye nokwenza imisebenzi eyahlukeneyo yeshishini kumbutho kunye nokuphuhlisa ngokulinganayo izakhono ekusebenziseni itekhnoloji kunye neendlela zeshishini ezisisiseko.
Uya kuthi ufumane ulwazi nakwezinye iinkalo zeshishini ezinje ngokuthengisa, ukuphathwa kweshishini, ukunika ingxelo ngogcino mali, ukuveliswa kwamaxwebhu, njl. Olu lwazi kunye nezakhono ziya kukuvulela kumathuba ngamathuba engqesho onokuwasebenzisa kwimibutho enje ngemfundo, ukhathalelo lwempilo, ezemali, ii-arhente zikarhulumente / iiarhente, njl.
# 7 Inkqubo yoKhathalelo lwaBantwana noLutsha kwi-Intanethi
Le yinkqubo yeminyaka emithathu ekwi-intanethi ekulungiselela ngezakhono zokunceda abantwana abasesichengeni, ulutsha kunye neentsapho ezineemfuno ezinzima. Uya kufundiswa zombini izakhono zethiyori kunye nezinto onokuzisebenzisa ukukhuthaza utshintsho oluqinisekileyo kunye nokukhula okunempilo kubathengi ngelixa uhlonipha inkcubeko yabo eyahlukileyo kunye neyantlukwano yoluntu.
Inkqubo yoKhathalelo lwaBantwana noLutsha kwiikholeji ezikwi-Intanethi zivula amathuba engqesho kunye namathuba oshishino ukuba usebenzele / nezikolo, amaziko oovimba boluntu, izibhedlele, amakhaya amaqela, iindawo zokuhlala, iinkqubo zobulungisa kulutsha, kunye neziko lonyango lwempilo yengqondo.
# 8 IiNkonzo zoLuntu kunye nezoBulungisa kwiKholeji ekwi-Intanethi
Le yinkqubo yekholeji ekwi-intanethi yexesha elizeleyo eya kuthi ikunike izakhono ezisemgangathweni kuzo zombini izinto ezenziwayo kunye nethiyori kwimicimbi yezomthetho kunye neyokuziphatha, amanyathelo okhuseleko, iindlela zokhuseleko, udliwanondlebe kunye nezakhono zongenelelo.
IiNkonzo zoLuntu kunye nezoBulungisa kwi-Intanethi ziya kukunika ulwazi olunzulu ngendlela yokusebenza nabantu abanemicimbi yezomthetho kunye namaxhoba kuluntu okanye kumaziko amaziko. Emva kokugqiba le nkqubo ungasebenza uye ngasese okanye usebenze ngendawo yokuhlala, amaziko oluleko, okanye uthathe inxaxheba kwezinye iinkqubo kunye neenkonzo.
# 9 Inkqubo yeKhompyuter yeeNkqubo zeKhompyuter
Ufuna ukulandela ikhondo lomsebenzi kwiNkqubo yeKhompyuter, emva koko le nkqubo yeminyaka emibini yeekholeji ekwi-intanethi yeyakho. Ngokusebenzisa iimveliso zesoftware ekhokelayo, uya kufunda ubuchule obubandakanyekayo kuphuhliso lwenkqubo yekhompyuter, uyilo, kunye nokulawula isiseko sedatha.
Ukwafunda nokufunda iilwimi ezinje ngePython, Java, COBOL, kunye ne-SQL, ukwazi ukusebenzisa isoftware efana neCASE kunye neOracle. Funda uhlalutyo olujolise kwinto kunye noyilo, iinkqubo zokusebenza (OS) kunye nekhowudi kwiindawo ezihlanganisiweyo, kunye nendlela yokulungisa ingxaki, ukuvavanya kunye nokugcina iikhowudi.
Unokujonga kwakhona uluhlu lwethu lwe iikhosi zasimahla ezinxulumene nekhompyuter kwaye ufake isicelo sayo nayiphi na enokukufanela.
Emva kokuba uthweswe isidanga kule nkqubo ungaya kumathuba emisebenzi njengewebhu, isoftware, ishishini, kunye nenkqubo yezicelo isakhono esifunwa kakhulu ziinkampani ezinkulu zobugcisa kunye nemibutho yanamhlanje.
# 10 yoLawulo lweProjekthi yeNkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi
Le nkqubo yeekholeji ekwi-intanethi ibonelela ngemfundo esisiseko esisiseko kulwakhiwo nakwintsimi enxulumene nayo, uya kuxhotyiswa ngezakhono nolwazi ngendlela yokulawula ngokufanelekileyo inkqubo epheleleyo yokwakha ukusuka kwinqanaba lokuqala ukuya ekugqityweni.
Njengomfundi woLawulo lweProjekthi yoKwakha, uyakulungela ukuqhubela phambili ishishini lokwakha kunye nendlela yokulawula iiprojekthi kuyo nayiphi na imeko enokuthi ivele kwiindawo zokwakha. Njengomntu ophumelele kule ndawo yokufunda, unokuqeshwa kwizikhundla ezahlukeneyo ezinje;
UMphathi wezeMisebenzi yoKwakha.
# 11 Inkqubo yeMfundo yaBantwana aBasaqalayo kwiKholeji
Le yinkqubo yexesha elizeleyo ekholejini ekwabonelela ngesakhono sokwenza, ukumilisela kunye nokuvavanya ikharityhulamu esekwe kumdlalo ngelixa usakha imeko ejolise ebantwaneni.
Inkqubo yeMfundo yaBantwana aBasaqalayo ikulungiselela ukuba ube ngumhlohli wabantwana kwiimeko ezahlukeneyo zokufunda kwasekuqaleni, ufumana izakhono nolwazi, zombini ithiyori kunye nezinto ezenzekayo, ukusebenza neentsapho kunye nenye inkxaso yobungcali enegalelo ekufundeni nasekukhuleni komntwana.
Inkqubo ye-12 yeKholeji yoLawulo oluNgxamisekileyo kwi-Intanethi
Umhlaba ubeka izoyikiso kunye nomngcipheko onokuthi ube ngowendalo okanye owenziwe ngabantu, kule nkqubo, uLawulo oluNgxamisekileyo, uyakube ulungiselelwe ngobuchule kunye nobuchule bokulawula ezi zoyikiso kunye nemingcipheko ngokujonga izihloko eziphambili kulawulo lomngcipheko, ukusebenza kwendawo yolawulo olungxamisekileyo, iziseko ezibalulekileyo ukhuseleko, kunye nocwangciso lokuqhubekeka kweshishini kunye nokuqokelelwa.
Le nkqubo yeekholeji ekwi-Intanethi ifuna umsebenzi onzima kunye noxinzelelo njengoko umgca wakho womsebenzi unokubeka abantu engozini enkulu okanye ubancede. Unokufumana ingqesho kuwo onke amanqanaba aseburhulumenteni nakumacandelo abucala kwizikhundla ezinje;
IGosa eliPhendulayo eliNgxamisekileyo
Abacwangcisi boLawulo oluNgxamisekileyo
Ukuqhubeka koShishino / uMcwangcisi
Abaququzeleli beNkqubo yoLawulo oluNgxamisekileyo
# 13 Inkqubo yokuXhobisa impilo kunye neMpilo kwiKholeji ekwi-Intanethi
Le yinkqubo yekholeji ekwi-intanethi yeminyaka emibini eya kuthi ikufundise izakhono kunye nolwazi lokunceda wena okanye abanye baphile ngendlela efanelekileyo kwaye basempilweni, ukulungele ukwamkela indima yomcebisi wezempilo kunye nomcebisi wezempilo kwasekuqaleni kokufunda le nkqubo.
Emva kokuthweswa isidanga kwiNkqubo yokuKhuthazwa kwezeMpilo kunye neMpilo kwi-Intanethi unokufumana amathuba engqesho kwishishini lokomelela kwiindawo ezahlukeneyo ezinokubandakanya;
Iiklabhu zezempilo nezempilo
Iinkqubo zokuzonwabisa kunye nokuqina
Iinkqubo zabucala nezoluntu
Amasebe olonwabo kaMasipala
Amaziko oluntu abemi abakhethekileyo
# 14 iAccounting Accounting kunye noPhando loRhwaphilizo kwiNkqubo yeKholeji ekwi-Intanethi
Le nkqubo yekholeji ikwi-intanethi ikuxhobisa ngezakhono zobuchule kunye neendlela ezifanelekileyo zokuhlalutya nokuphanda ubungqina bezezimali, ukusebenzisa ubuchule beekhompyuter kuphando, ukusebenzisa ithiyori yokuziphatha kunye nolwaphulo-mthetho ukufumana nokukhusela ubuqhetseba kwihlabathi lanamhlanje leshishini.
Emva kokuthweswa isidanga, unokuqeshwa kwicandelo labucala okanye likarhulumente kwiindima ezinje;
Urhwaphilizo kunye nelahleko yokulahleka kwezoqoqosho
# 15 Inkqubo yoLawulo lwaBasebenzi kwiKholeji ekwi-Intanethi
Le yinkqubo yekholeji yonyaka omnye ekwi-intanethi ekufundisa ngendlela yokulawula abantu kunye neziphumo zabo kumbutho. Uya kufumana ulwazi oluyimfuneko, izakhono, kunye nobuchule bokucwangcisa indawo yokusebenza kunye nabasebenzi ngaphakathi, ukulawula izixhobo, ukongamela iiprojekthi, kwaye ngexesha lokufunda ufumana ukuphonononga ezinye iinkalo ezinje ngoqeqesho nophuhliso, ucwangciso kunye nobudlelwane kumzi-mveliso, ukugaya, kunye imbuyekezo.
Kuya kufuneka ufunde nzima kule nkqubo njengoko inkqubela / ukusilela kombutho, ishishini, okanye iprojekthi ixhomekeke kuwe. Emva kokuthweswa isidanga uvulelekile kwizikhundla ezahlukeneyo zomsebenzi kwicandelo likarhulumente okanye labucala apho ungasebenza khona;
Abasebenzi ngokubanzi okanye umlungelelanisi
Iqabane lezabasebenzi kwishishini
Ingcali yezempilo nezokhuseleko emsebenzini
Ingcali kwezonxibelelwano kwezoshishino
Ingcali yoqeqesho nophuhliso
# 16 Ulawulo lweOfisi- Inkqubo yeKholeji ePhakamileyo ye-Intanethi
Le yinkqubo yeminyaka emibini ekwi-Intanethi apho uya kufunda ukwakha izakhono ngokusebenzisa izinto ezininzi ezisetyenziswayo kwiofisi efanisiweyo kwiindawo zosasazo lwentlalo, ucwangciso lwemicimbi, ulawulo lweofisi, ezabasebenzi, ukhenketho lwasekhaya nakwamanye amazwe.
Ulawulo lweOfisi-Isigqeba sikulungiselela umsebenzi onomvuzo njengengcali yezolawulo kwicandelo labucala okanye likarhulumente ukuze usebenze kwimimandla enjengeenkampani, urhulumente, imibutho kunye namashishini amancinci.
# 17 Ulawulo lweOfisi-Inkqubo eKholeji ekwi-Intanethi
Le yinkqubo yasekholejini yonyaka omnye apho uphuhlisa khona izakhono ezisebenzayo kunye nethiyori kwimeko ezahlukeneyo zeofisi, ikhulisa amandla akho ekusebenziseni izixhobo zedijithali ngokuqhuba uphando kunye nokuqonda usetyenziso lweMicrosoft Office kunye nezinye iisoftware esekwe kumzi mveliso.
Ulawulo lweOfisi-Inkqubo ngokubanzi ekwi-Intanethi ikubonelela ngezakhono kunye nolwazi lokukulungiselela ikhondo elinomvuzo kwicandelo. Unokufumana umsebenzi kwiindawo ezahlukeneyo zokuxhasa inqanaba labasebenzi okanye izikhundla zolawulo kwimibutho yoluntu okanye yabucala.
Inkqubo ye- # 18 yamaPolisa eSiseko seKholeji
Le yinkqubo yekholeji ekwi-Intanethi yeminyaka emibini ekubonelela ngolwazi olunzulu ngesiseko samapolisa anikezela ngemiyalelo kulwaphulo-mthetho ekuhlaleni, inkqubo yophando, iindlela zokuziphatha, iyantlukwano, unxibelelwano, amagunya amapolisa, kunye neenkqubo zombini kwithiyori kunye nemiba esebenzayo .
Emva kokuthweswa isidanga, uvulelekile kwizikhundla ezahlukeneyo zomsebenzi ezinje;
Iinkonzo zomthetho kamasipala
Inkonzo yamapolisa emkhosini
Iiarhente zeenkonzo zentlalo
Iinkonzo zamapolisa zikamasipala, okanye zephondo
# 19 Inkqubo yeMicimbi yoLawulo kwiKholeji ekwi-Intanethi
Ngokujolisa ekukhuseleni ukhuseleko lwabantu kunye nokusingqongileyo, inkqubo yoLawulo ye-Intanethi yexesha elizeleyo iya kukufundisa izakhono kunye nolwazi lokulawula iimveliso kumashishini afana nokhathalelo lwempilo, i-biotechnology, ukutya, imichiza kunye neagrochemicals.
Le nkqubo ibaluleke kakhulu kwaye ifuna umsebenzi onzima njengoko ijongene nemicimbi ephambili malunga nobomi babantu. Emva kokuthweswa isidanga, kufuneka ube unolwazi olusemgangathweni kulawulo ngokubanzi kunye nendlela yokulusebenzisa ukukhusela uluntu, impilo yendalo esingqongileyo kunye nokhuseleko kwiindawo;
Iikhemikhali zorhwebo kubandakanya ukuvelisa kunye neemveliso zabathengi
Amayeza kunye nezixhobo zonyango
# 20 Inkqubo yaBabhali abaDala yeKhompyutha
Ukulandela ikhondo elinomvuzo kunxibelelwano olungasebenziyo kunye nokubhala, kuyacetyiswa ukuba uye kwinkqubo yoMbhali wezobuGcisa kwiikholeji njengoko izakukubonelela ngezakhono noqeqesho olufunekayo ukufezekisa injongo yakho kunxibelelwano lobugcisa.
Yinkqubo yonyaka omnye apho uya kuba nezakhono zonxibelelwano ezininzi kubandakanya indlela yokunxibelelana nabaphulaphuli ekujoliswe kubo, ukulawula iiprojekthi ezininzi ukuhlangabezana neenjongo zeqela, uphando kunye nokuhlalutya izinto zobuchwephesha kwaye ukwazi ukwenza amaxwebhu acwangcisiweyo kumatyala ohlukeneyo okusetyenziswa .
Emva kokuthweswa isidanga, unokuthatha isigqibo sokusebenzisa izakhono zakho kubucala okanye kubasebenzi bakarhulumente okanye uye kwi-freelance.
Apho unoluhlu oluhlanganiswe ngokupheleleyo lweenkqubo ze-20 zeekholeji ezikwi-Ontario onokukhetha kuzo, ufunde kakuhle, kwaye uye kwinkqubo efanelekileyo kakhulu.
Ezi nkqubo ndizichazileyo ziyafuneka kushishino lwabasebenzi kwaye kuba akukho lwazi luchithwayo ungafunda ngaphezulu kwesinye ukwenza i-CV yakho ijongeke ngakumbi kwaye ulwazi olufunyenweyo lukwenza ukuba ube yingcali, ikubeke phambili kukhuphiswano lwabasebenzi kwaye ufumane ukwenza imali eninzi ngokunyusa okanye umsebenzi ohlawula ngcono.
Nabani na angafaka isicelo sayo nayiphi na le nkqubo kwaye isatifikethi sokugqitywa siyinyani ngokunjalo.
Iingcebiso ezi-7 eziSebenzayo zokuFunda zaBafundi beKholeji
Uluhlu lweeKholeji eCanada zabaFundi beZizwe
Iinkqubo ezingama-20 eziGcweleyo kwi-Intanethi eOntarioEyona nkqubo yeKholeji ikwi-IntanethiIinkqubo ezigcweleyo ezikwi-IntanethiIinkqubo ezigcweleyo ezikwi-Intanethi eOntarioInkqubo yeKholeji ekwi-IntanethiIinkqubo ezikwi-Intanethi eOntario
Post Previous:Izatifikethi zeShishini ezi-9 kufanelekile ukuba uzifumane kwaye ngoba